Igbo, John: Lesson 071 - Jisos n'ofe Jọdan (Jọn 10:40 - 11:16) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 071 (Jesus across the Jordan)
a) Jisos n'ofe Jọdan (Jọn 10:40 - 11:16)
11 O kwuru ihe ndị a, mgbe o mechara, ọ sịrị ha: "Enyi anyị, Lazarọs, arahụwo ụra, ma m na-aga ka m kpọtee ya n'ụra." 12 Ya mere, ndị na-eso ụzọ ya sịrị: "Onyenwe anyị, ọ ghaghi inwu. 13Ma Jizos kwuru okwu bayere ọnwu-Ya, ma ha nēche na Ọ nēkwu okwu bayere izu-ike; 14 Ya mere Jizos siri ha nke-ọma, Lazarọs anwuwo. 15 Mu onwem nāṅuri ọṅu n'ihi unu, na anọghm n'ebe ahu, ka unu we kwere. Otú ọ dị, anyị gakwuru ya. "16 Ya mere, Tọmọs, onye a na-akpọ Didimọs, gwara ndị na-eso ụzọ ibe ya, sị:" Ka anyị gaa, ka anyị wee soro ya nwụọ."
Jizọs kọwara Lazarọs dị ka "onye anyị hụrụ n'anya". Ọtụtụ mgbe, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya abụwo ndị ọbịa n'ụlọ Lazarọs. N'ihi ya, ọ bụ enyi nke ndị niile na-eso ụzọ. Anyị pụrụ ikwu na Lazarọs dị ka "onye Jizọs hụrụ n'anya" yiri aha Abraham dị ka 'Enyi nke Chineke.'
Jizos ji okwu a bu "ura" nye onwu, ikwusi ike na onwu abughi njedebe nke ndu. An'anyị na-ala n'iyi ma mkpụrụ obi anyị nọgidere. Anyị zuru ike taa bụ n'ime Onyenwe anyị site na okwukwe. Anyi nwere afọ ojuju ma zuo oke n 'ndu ya, anyi ga-ahuta anya nke Onye nzoputa anyi na-eme ka anyi bie n'onwu. Anyị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.
"Ana m aga ịkpọte ya," ka Jizọs ji obi ike kwuo. Ọ sịghị, "Ka anyị kpee ekpere ka anyị chọpụta ihe Chineke chọrọ ka anyị mee, na otu anyị ga-esi kasie ezinụlọ anyị obi." Ee e, Jizọs na Nna ya na-akparịta ụka ruo ụbọchị abụọ tupu ozi ọma abịara ya banyere ọnwụ enyi ya. Enye ama enen̄ede ọfiọk ke Lazarus adaha ada ke iso ubọn̄ esie. Nke a bụ iji mee ka okwukwe ndị na-eso ụzọ ya sikwuo ike ma gosi ndị iro ya na ọ bụ ya bụ Mesaya. Ekem enye ama adian do ete, "Ana m aga zụlite ya," dị ka à ga-asị na nne ga-asị, "Ana m aga kpọte nwa m, na oge ọ ga-aga akwụkwọ." Jizos egosighi oge obula, obu ndu n'onwe ya na onyenwe nke onwu. Okwukwe nke Jizos na-eme ka anyi ghara icho egwu, anyi ga akwado anyi na ndu.
Ndị na-eso ụzọ aghọtaghị ihe mmeri Kraịst nwere n'oge ahụ. Ha chere na Lazarọs na-ehi ụra; n'ihi ya, ọ dịghị ihe mere ọ ga-eji gaa ya ma kpọtee ya. Karịa ka ha na-egbu ọnwụ n'aka ndị Juu.
Jizos kwuputara okwu banyere onwu Lazarọs, si, "O nwuru anwu". Akụkọ a na-enye ndị na-eso ụzọ nsogbu n'obi, ma Jizọs mesiri ha obi ike, sị, "Ana m aṅụrị ọṅụ." Nke a bụ azịza nke Ọkpara Chineke rue ọnwụ. Ọ na-ahụ mmeri na mbilite n'ọnwụ. Ọnwụ abụghị ihe na-akpata ịkwa arịrị ma ọ bụ ịṅụrị ọṅụ, n'ihi na Jizọs mesiri ụmụazụ ya ike maka ndụ. Ọ bụ ndụ; onye ọ bụla nke kwere na ya na-ekere òkè ná ndụ ya.
Jizos gara n'ihu ikwu, "Ana m aṅụrị ọṅụ n'ihi unu, na anọghị m ya mgbe ọ nwụrụ, ma agwọghị ya ebe ahụ, bụ ihe ịrịba ama banyere njedebe nke onye ọbụla, mana, okwukwe na ya amalitere ndụ ọhụrụ. Ka anyị gakwuru ya. " Nke a na-egosi anya mmiri na iru uju maka ụmụ mmadụ, ma maka Jizọs ọ na-ekwu maka mbilite n'ọnwụ. Anyị na-ekele Chineke na Jizọs ga-asị, mgbe anyị dina n'ili, "Ka anyị gakwuru ya." Ọbịbịa ya ga-apụta nnwere onwe, ndụ na ìhè.
Tọmọs, bụ onyeozi, hụrụ Jizọs n'anya ma nwee obi ike. Mgbe ọ chọpụtara na Kraịst kpebisiri ike ịgakwuru ozu, n'amaghị na nzube Kraịst bụ ịdọpụ ya n'ili ya, Tọmọs tụgharịrị na ndị ibe ya ma kwuo hoo haa, "Anyị agaghị ahapụ Jizọs naanị, anyị hụrụ Onyenwe anyị n'anya ma soro ya gaa ọnwụ. "Anyị nile dị n'aka ya." Thomas kwusiri ike na ya ga-eguzosi ike n'ihe ruo ọgwụgwụ.
Gịnị mere Jizọs ji gaa n'ihu iji merie Lazarọs?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:21 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)